Chikamu chemagetsi chinoshanda senzvimbo yekutizira mukudonha kwemusika wemasheya | Ehupfumi Zvemari
Chikamu chegetsi chete ndicho chakaramba chakayangarara kubva kudonha mune yakasarudzika indekisi yeSpanish equities, iyo Ibex 35. Kuti mukati rinopfuura vhiki rapfuura kubva pamazana mapfumbamwe nemazana mapfumbamwe kusvika pamazana mapfumbamwe ezviuru uye nehunhu hwehunyanzvi hunonetsekana nekuda kwezvidiki nepakati. vatengesi. Masheya emasheya akadai se Endesa, Iberdrola kana Naturgy vanga vari vamwe vevashoma vakasara vari munzvimbo yakanaka mukati memazuva ano. Iko kurwa kwekutengeserana pakati peUnited States neChina kwakashanda sekukonzeresa zvekuti kumanikidza kwekutengesa kwaiswa pachena kwazvo kumatenga ekutenga.
Mukati meichi chirevo chizere, masheya kutenderera pasirese ari kuratidza kwakanyanya kudonha mumakore achangopfuura. Nemadzinza pamusoro pe5%, mune izvo zvinoita nguva yakaipisisa kumisika yemari yegore rese razvino. Iko kukosheswa kwehunhu hwekutenderera, maindasitiri uyezve emari mapoka ndeavo vakaita pakaipisisa mumazuva ano ekugadziriswa kwakakomba mune ese masheya indices. Nezviratidzo zvese zvekuti mapopoma achadzika mukati memwedzi iri kuuya.
Kamwe zvekare, masheya ekuzvidzivirira akanyatsopindura pakurwiswa uku kwekutengesa pamisika yemari. Kusvika pakuti kunyangwe mune ino nyowani mamiriro vane yakadzoserwa ichienzaniswa nemitengo yakatarwa vhiki rapfuura yapfuura. Ichokwadi kuti misika yemasheya yeSpain haina kudonha zvakanyanya seiya yeUnited States, asi kunyangwe zvakadaro, dambudziko nyowani iri iro rinobata misika yeutengesi rakabuda zvakashata uye rinogona kugara mazuva mazhinji kana kunyange vhiki. Pamberi pekuputsa kwezvakakosha zvinotsigirwa muhunyanzvi hwayo kuongorora kwakanetsa kutaridzika kwayo.
1 Chikamu chemagetsi: yakachengeteka kubva pakuwa
2 Izvo chete kukosha mune girini
3 Inogona kusvika sei iyo Ibex?
4 Inouya migove kubva kumakambani emagetsi
5 Tenga kana kutengesa pamusika wemari?
Chikamu chemagetsi: yakachengeteka kubva pakuwa
Zvekare zvakare, kuchengetedzeka uko kunoumba chikamu chakakosha chemari yenyika kwakabatsira zvakanyanya kubva kune iyi nyowani yemusika wemari. Pakati pezvimwe zvikonzero nekuti chikamu chakanaka chemari yevarimi yaenda kune yayo mikuru stock values. Munzvimbo inonetsekana zvakanyanya kune vashoma uye vepakati varimari nekuda kwekuti iyo ipfupi nepakati term tambo yakachinja kubva bullish kuenda kune bearish mumazuva mashoma ekutengesa. Kunyange makambani emagetsi anga ari iwo chete akanakidzwa muvhiki rapfuura uye vachipesana nemafungiro evanoongorora zvikuru emisika yemakambani.
Mukati memafambiro aya, Endesa yakwira kusvika pamakumi maviri nemakumi maviri neshanu euros pamugove, apo zvinopesana Iberdrola inoenderera ichitengesa pamusoro pe8 euros. Muzviitiko zvese izvi zviri pasi pekumuka kwemahara pasina mubvunzo chiri chakanakisa pane zvese kuongororwa kwehunyanzvi hwema stock stock. Iko, sezvo mapopoma acho ari makuru, izvi zvirevo zvinokosheswa kuisa mari mumusika wemasheya. Kurovedza muviri zvakare seyakachengeteka nzvimbo dzekuchengetedza muSpanish equities. Iko kunochengeterwa mari yechikamu chakanaka chevashambadzi mumusika wemasheya.
Izvo chete kukosha mune girini
Muvhiki ino zvakagadzirwa izvo zvinoita zvese hunhu akanyorwa mune dzvuku. Chete hunhu hwemagetsi chikamu chakachinja iyo yeiyi yakashata maitiro. Icho chinhu chakwezva kutarisisa kwakawanda kune vashoma nepakati varimi. Kusvika padanho rekuti vatendeukira kune idzi nzvimbo kuchengetedza nzvimbo dzavo mumisika yemari. Kuve ivo vega vakakoshesa muvhiki rapfuura. Nekukoshesa kwevhiki nevhiki kweinenge 2% uye 3% uye izvo zvinowedzerwazve nekudzoka kunogadzirwa kuburikidza nezvikamu uye izvo parizvino zvine avhareji uye pagore purofiti ye6%.
Izvo pazviri pane zvinopesana, aya maitiro ari kusimbiswa munzvimbo dzawo nekuda kwekushaya simba kweakasara maitiro eiyo nyika equities. Kunyangwe paine mukana wekuti nzvimbo dzavo dzinogona kusimbiswa kubva zvino zvichienda mberi. Panguva yekusagadzikana kukuru kwemisika yemari semugumisiro wekuwedzera kweiyo hondo yekutengeserana pakati peUnited States neChina uye izvo zvinogona kuwedzera mamiriro ezvinhu mumazuva asati asvika emwedzi yezhizha. Iko vanoongorora zvemari vanofanoona zvichidonha zvinogona kutora iyo Ibex 35 kusvika zviuru zvisere zvemapoinzi.
Inogona kusvika sei iyo Ibex?
Iko kutaridzika kweSpanish inosarudza indekisi zvirokwazvo haina kunaka mune ino nyowani mamiriro mumisika yemari. Kusvika pakuti yatove kutengesa panguva dzepagore dzakaderera uye padyo padyo nematanho ari pasi pe9.000 euros. Mupfungwa iyi, hazvigone kukanganwika kuti nguva dziri pakati pemwedzi waKubvumbi naGumiguru dzakanyanya kushata pakuisa mari mumisika yemari. Nhoroondo yave iri nguva yakaipa kwazvo uye yanga ichingogara ichishandira kuitira kuti kukosha kwemusika wemasheya kuderere mumwedzi iyi. Chinhu chinoratidzika kunge chiri kuitika zvakare, apo tarisiro dzakaita senge dzakapesana.
Nepo kune rimwe divi, chirevo chinowanzoitika chinowanzozadzikiswa mumisika yemari haigone kukanganwika. Mupfungwa yekuti zviri nani kuwana mari shoma pane kuremerwa ramangwana. Aya mamiriro akatambudzwa neruzhinji rwevashambadzi, kunyangwe iyo nyanzvi kwazvo mukushanda kwemusika wemasheya. Izvi zvinoreva kuti haina kukosha kuisa mari mukushanda mumisika yemari. Kunze kwekunge mafambiro acho akananga kuchikamu chemagetsi uye chikamu chakanaka chevamiriri vayo.
Inouya migove kubva kumakambani emagetsi
Chimwe chinhu chinofarira zvinzvimbo zvehunhu hwesangano remagetsi ndezvekuti kugoverwa kwezvikamu pakati pevachagovana navo padyo. Nekuti zvirizvo, mumwedzi yaChikumi naJuly idzi kubhadhara paakaundi kuchaitwa. Izvi zvinokonzeresa kuti huwandu hwebvumirano hwakwira mumazuva anotevera. Nekiyi mune yekudyara portfolio yemamwe machengetedzo uye kuti ivo vanoona sedziviriro izvi zvirevo zvemunyika zvinosiyana mari. With inodzoka pamusoro pe5% kuburikidza nemubhadharo wakatarwa uye wakavimbiswa gore rega rega. Seimwe yeanonyanya kukwezva kunyorera zvikamu zvemagetsi.
Pachave nenguva yekusiyanisa zano rekudyara, senge mushure mekubhadharwa kwezvikamu kana mushure mezororo. Kwamunogona sarudza zvikamu zvine hukasha uko mukana wekudzokorodza uine simba uye izvo zvinogona kuve zvinowedzera mufaro kubva panguva dzino. Kunyangwe pamutengo wekufungidzira dzimwe njodzi mukuita basa sezvo kusagadzikana kwavo kuri kwakanyanya zvakanyanya nekuda kweakasarudzika maficha ekuchengetedzeka uku. Nekuti hazvigone kukanganwika kuti idzi tsika dzakatambura zvakanyanya kuderera mumazuva ano emwedzi waMay.
Tenga kana kutengesa pamusika wemari?
Panguva iyo mari inowanikwa inotanga kuoneka pane mari yakaitwa, zvakajairika kuti masaver vafunge kana iri nguva chaiyo yekutengesa kana, asi, zvirinani kumirira iyo mabhenefiti akawedzera bulky. Kune izvo izvo zvakakosha kutiimboita kare zano umo zvinangwa zvemusimari zvakatemerwa. Zvichienderana neprofile yako, mazwi ayo kwairi kunongedzwa uye capital yakapihwa, inova iyo inozopedzisira yasarudza kuti wotora sarudzo pane imwe kana imwe nzira yekutsinhana kwemasheya. Kana pane zvinopesana, gara mune zvemari muaccount account.
Mumamiriro ezvinhu ekukwira kumusoro, chinhu chinonzwisisika kubata mari kusvikira wawana mitengo iri nani muchikamu chayo. Kana kusvika zviratidzo zvioneke zvinoratidza kupera kweizvozvo, kunyangwe paine njodzi ye kuwira mumamiriro ezvinhu anoshamisa izvo zvinogona kuita kuti kukosha kuwire zvakanyanya nemhedzisiro yekurasikirwa mune yako mari chirevo. Mupfungwa iyi, zvine hungwaru kusarudza fomura inosanganisa iyo equation pakati pekuchengetedza nenjodzi senzira yekuchengetedza huwandu hwapihwa. Kunyanya mune iyo bearish nguva uko kuri nyore kune zvishoma zviwanikwa zvakawanikwa kuva mashoma ekutengesa zvikamu mune yakatsvuka kune iye investor. Nedambudziko ipapo rekuti tengesa nehurema here kana kuti kutopinda zvakadzika mavari.
Chero zvazvingaitika, isu parizvino tiri mune imwe yenguva dzakanyanya muSpanish equities. Nenjodzi yekupedzisira yekuti Ibex 35 inogona kuenda yakaderera zvakanyanya kupfuura panguva ino. Inogona kutotengesa mune imwe nhanho inoenda kubva pamakumi masere kusvika pamazana masere nemazana mashanu poindi. Kunyanya kana pasina mhinduro muhondo yezvino yekutengeserana pakati peUnited States neChina. Chinhu chinogona kunyatso kuitika kuve nacho kubva kune zvataurwa zvazvino zvemutungamiri weAmerica, VaDonald Trump. Nenjodzi idzo idzi dzinogona kupa kune vashoma uye vepakati varimi. Nedambudziko ipapo rekuti tengesa nehurema here kana kuti kutopinda zvakadzika mavari.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Chikamu chemagetsi chinoshanda senzvimbo yekutizira mukudonha kwemusika wemasheya